Goonjeex “Sida kaliya Axmad looga adkaan karo, Jubbaland u soo ceshan karno waa dib u soo noolaynta Dooxada Jubba” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Goonjeex “Sida kaliya Axmad looga adkaan karo, Jubbaland u soo ceshan karno...
Goonjeex “Sida kaliya Axmad looga adkaan karo, Jubbaland u soo ceshan karno waa dib u soo noolaynta Dooxada Jubba”
Senator Cabdiwaaxid Goonjeex oo ka qaybgalay kulan qado ah oo yeeshaan qaar ka kimida xildhibaanada iyo ganacsadata ka soo jeeda beesha Mariixaan oo lagu xusaayay maalinta ciida ayuu ka sheegay, in da’daaladii horay loogu galay in Jubbland dib loogu soo celiyo gacanta Mariixaan ay dhamaantood ku soo dhamaadeen fashil.
“Walaalayaal, anigu waxa aan qabaa in isbahaysigii beesha Habargedir iyo Mariixaan ee labada waji lahaa ee kala ahaa walaalaha Gal-gaduud ee dhankaa iyo Galmudug ahaa iyo kii Dooxada Jubba dib loo soo nooleeyo, hade taa uma lihi Habergedir ayaan xidid ila ah, laakiin waa sida kaliya ee aan Jubbaland ku soo ceshan karno”. Ayuu yiri Goonjeex.
Goonjeex ayaa ku daray “ Anigu Farmaajo waxaan kula taliyay, (rag hadana nala joogana way ila joogeen), in uu Ra’iisal Wasaaraha la siiyo beesha Habargedir si awooda Madaxweynaha iyo tan Ra’iisal Wasaaraha Habargedir ah loogu adeegsado in Axmad Madoobe iyo dowlada Kenya oo isaga adeegsato loola dagaalo, Jubbaland aan gacan Mariixaan dib ugu soo celino”.
Goonjeex iyo Xildhibaano, ganacasato ka soo jeeda beesha Mariixaan ayaa olole ugu jira sidii Habargedir loo siin lahaa jagada Ra’iisal Wasaaraha. Xildhibaanada hoowshaan horseedka u ah waxaa ka mida, Farax Cabdi Xasan, Cabdishakur Cali Mire, Goonjeeex, Gancasade Yusuf Cade iyo qaar kale oo ka tirsan ganacsato ku ganacsata magaalooyinka Muqadisho iyo Nairobi.
Sida uu MOL uu la wadaagay qof ka mida ahaa dadkii qadada ciida ka qayb galay, Goonjeex ayaa uga digay beesha Mariixaan in ay taageeraan qorshaha lagu doonayo in qof Abgaal ah la siiyo jagada Ra’iisal Wasaasaraha.. Waxa uuna carabka ku dhuftay in Abgaal uu ku dhamaanayo Majeerteen, taas oo si dadban u taageeri doonta beesha Ogaadeen oo uu hada xiriir hoose kala dhaxeeyo beesha Majeerteen.
Mid ka mida ganacasada goobjooga ahayd ayaa xasuusiyay Goonjeex in beesha Mariixaan oo aan siyaasadba ku jirin oo Soomaali godob u haysato ay siyaasadda dib ugu soo galiyeen beesha Abgaal, waxaa uuna sheegay in ay nasiib-xumo tahay in Goonjeex uu doonayo in uu aano qabiil oo cusub uu galiyo beesha Mariixan.
Next articleKenya oo dib u fureeysa duulimaadkii caalamiga ahaa Maanta